“farmtrac လယ်ထွန်စက် +ရောင်းရန်ရှိသည် massey ဖာဂူဆန်လယ်ထွန်စက်” – Tractor Loader
Posted on October 8, 2018 by Wesley Gibbs
“farmtrac လယ်ထွန်စက် +ရောင်းရန်ရှိသည် massey ဖာဂူဆန်လယ်ထွန်စက်”
“Woodside ဟာ ခုချိန်အထိ အောင်အောင်မြင်မြင် လုပ်ဆောင်နေတယ်။ တချိန်မဟုတ် တချိန်မှာ ဘာမှ မရှိတဲ့ တွင်းလည်း တူးမိပြီး အရှုံးပေါ်ရင် ပေါ်နိုင်မယ် လို့ လောက သဘာ၀ ပျမ်းမျှခြင်း ဥပဒေသက ဆိုထားတယ်လေ” ဟု Deutsche ဘဏ်မှ သုတေသီ ဂျွန်ဟာဂျီက ပြောသည်။
မြန်မာအပါအဝင် ကမ္ဘောဒီးယားနှင့် ဗီယက်နမ်တို့သည် National Resource Governance Institute (NRGI) ၏ သယံဇာတ စီမံအုပ်ချုပ်မှု အညွှန်းကိန်း ဖြင့် တိုင်းတာစစ်ဆေးရာတွင် ပါဝင်သည်။ အဆိုပါ ဖြစ်စဉ်တွင် ရေနံ၊ သဘာဝဓာတ်ငွေ့နှင့် သတ္တုထုတ်လုပ်သည့် နိုင်ငံများကို အမှတ်ပေးခြင်း၊ အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းတို့ကို ပြုလုပ်သည်။အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းကို နိုင်ငံ ၅၈ခုကို ပြုလုပ်ရာ မြန်မာသည် အဆင့် ၅၈ သို့မဟုတ် နောက်ဆုံးအဆင့်အဖြစ် သတ်မှတ်ခံရသည်။21 (ကမ္ဘောဒီးယားက ၅၂ ဖြစ်ပြီး ဗီယက်နမ်က ၄၃ ဖြစ်သည်။)
21. 2013 Resource Governance Index. Accessed 12 May 2017. View source. Also, see International Monetary Fund. 2012. Guide on Revenue Transparency. Washington DC: IMF, 2. Accessed 21 June 2012.
50 200 မီလီမီတာ 0,008 0,035 ဒီဂရီကနေ gradient ကိုအတူထားရာမှတစ်ဦးချင်းနှင့်အတူပြည်တွင်းပိုက်အပိုင်း။ 0,007 ဒီဂရီဆက်သွယ်ရေးခြံ (125 မှ 150 မီလီမီတာ) အတွက်ဘက်လိုက်မှုလိုအပ်ပါသည်။ အီလက်ထရွန်းနစ်အဆငျ့ – အထူး device ကိုသုံးပြီး, ကသတ်မှတ်ရန်။ ပိုက်နှင့်တုတ်ကျင်းနံရံများအကြားသဲဖြန်း, ပြီးတော့သူ့ရဲ့ tamped ။ ဖြစ်နိုင်သမျှပုံပျက်သောအနေဖြင့်ပိုက်လိုင်းကိုကာကွယ်ရန်ဒီတော့နိုင်ခြင်း။
သင်သည်သင်၏လယ်ယာဖွင့်လှစ်ခြင်းမပြုမီ, ကထိတွေ့ဆက်ဆံတံ့သောအရာကိုလှုပ်ရှားမှုများဆုံးဖြတ်ရန်ရန်သေချာစေပါ။ အဓိကဦးတည်ချက်ယေဘုယျအားဖြင့်အမျိုးမျိုးသောစိုက်ပျိုးရေးထုတ်ကုန်များထုတ်လုပ်မှုနှင့်အပြောင်းအလဲနဲ့စဉ်းစားသည်။ ထို့အပြင်, ဒီထုတ်ကုန်များ၏သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး, သိုလှောင်ရောင်းချခြင်းတို့ပါဝင်သည်။ သို့သော်စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းနှင့်ဆက်စပ်သောအခြားအလှုပ်ရှားမှုများတွင်ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့, သင်တန်း, ကတားမြစ်သည်ကိုမရ။
WYSIWYG Web Builder ရဲ႕ အဓိပၸါယ္ကေတာ႔ WYSIWYG (What-You-See-Is-What-You-Get) ပါတဲ႔ ၊ HTML Knowledge မလိုအပ္ပဲနဲ႔ကို Web Page ေတြကို အလြယ္ကူဆံုး တည္ေဆာက္ႏုိင္ဖို႔ ကူညီေပးႏုိင္တဲ႔ Program တစ္ခုပါ ။ Output Standard အေနနဲ႔ကေတာ႔ HTML4, HTML5, XHTML, CSS3, PHP စတာေတြကို…
အဆိုပါ HDD ဟာကျင်းပေါက်သို့ bentonite solution ကိုဝင်ပေါက်နှင့်ထွက်ပေါက်၏ကြီးမားသောငွေပမာဏအတွက်အသုံးပြုသည်ကတည်းကကတူးဖော်ပြီးစီးပြီးနောက်, ကလက်ဖယ်ရှားပစ်ရန်လိုအပ်သောဖြစ်ပါသည်, ဒါမှမဟုတ်စုပ်စက်တို့က pumped သောပိုလျှံစုဆောင်းမိလာလိမ့်မည်။ အားလုံးအကြွင်းအကျန် bentonite ၏စွန့်ပစ်ရမည်ဖြစ်သည်။
သငျသညျကုန်စည်ရောင်းရာမှရငွေကိုပြန်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းထဲသို့သွင်းထားရပါမည်။ လယ်ယာချဲ့ထွင်ရန်စတင်သောအခါ, ပုဂ္ဂလိကလယ်ယာစိုက်ပျိုးသို့မဟုတ်တစ်ဦးချင်းစီလုပ်ငန်းရှင်များအတွက်သက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်များနှင့်မှတ်ပုံတင်ရန်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ စနစ်တကျစီးပွားရေးကို run ဖို့, မိသားစုလယ်ယာများအတွက်စီးပွားရေးအစီအစဉ်ရေးသားဖို့မေ့လျော့ကြပါဘူး။ အသိဥာဏ်ဒီကိစ္စကိုချဉ်းကပ်အပေါင်းတို့နှင့်တကွလိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများကိုစုဆောင်းရန်လျှင်တောင်သူလယ်သမားစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်နိုင်ငံတော်အကူအညီမှရရှိသောနိုင်ပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် အမေရိကန်နိုင်ငံထုတ်လယ်ထွန်စက် ကိုယ်စားလှယ်အရောင်းပြခန်းကို နိုဝင်ဘာ ၂၁ ရက်နေ့တွင်စတင်ဖွင့်လှစ်လိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်၊ ရှမ်းပြည်နယ်(မြောက်ပိုင်း) လားရှိုးမြို့၊ ရပ်ကွက်(၁၂)၊ နယ်မြေ(၁၃)၊အမှတ်(၁၃/၅၂)ပြည်ထောင်စုလမ်းမကြီးတွင်တွင်ဖွင့်လှစ်လိုက်တာဖြစ်ပြီးအမေရိကန်နိုင်ငံထုတ်ဂျွန်ဒီးယားလယ်ယာသုံးစက်များကိုအရစ်ကျစနစ်ဖြင့်ရောင်းချပေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ်။ဂျွန်ဒီးယားလယ်ယာသုံးစက်များမှာ ငွေကျပ်သိန်း ၂၀၀ မှ ကျပ်သိန်း ၁၀၀၀ ကျော်အထိ တန်ဖိုးအသီသီးရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။
One Reply to ““farmtrac လယ်ထွန်စက် +ရောင်းရန်ရှိသည် massey ဖာဂူဆန်လယ်ထွန်စက်””
20 တန်ဒီ model ၏ဝန်စွမ်းရည်က 6520 အခြေစိုက်စခန်းအတွင်းယခင်မော်ဒယ်များနှင့်အတူနှိုင်းယှဉ်လျှင်ပိုရှည်ကိုပထမဦးဆုံးလူကြိုက်များမော်ဒယ်နှစ်ကြိမ်စွမ်းရည်ထက်အားဖြည့်ခြင်း, ခန္ဓာကိုယ်အရှည်သိသိသာသာတိုးပွားလာနေပါတယ်။
Previous PostPrevious “john deere partes de tractores de jardín |dónde comprar John Deere cortadora de césped”
Next PostNext “john deere loader -comment fonctionne John Deere transmission hydrostatique”